Kumuncu eSweet Home | News24
Kumuncu eSweet Home
Isiza senkampani iShar Civils eyakha iindlela kwindawo ya matyotyombe iSweet Home. Umfanekiso: UNATHI OBOSE
Lugqejwe olungatsitywa ntwala uphuculo lweendlela kwindawo ya matyotyombe iSweet Home, ngase Philippi, emva kokuba inkampani iShar Civils, eyenza lo msebenzi, igqibe kwelo kuba icime zonke izixhobo nezithuthi zokusebenza.
Isigqibo sale nkampani silandela ukuhlaselwa kubulawe omnye wabasebenzi, nobe ngumqhubi wegandaganda, ebutsheni bale veki.
Esi sihelegu sishiye abasebenzi kunye nabahlali bekhwanqisekile kwaye benovalo bengazi ukuba iya kuzala nkomoni.
Ngokwengxelo lo msebenzi udutyulwe lahlanza iselwa ilanga lihlabe umhlaba, ntoleyo ebangele inkxalabo kuye wonke ubani. Ukuhlaselwa kwalo msebenzi sisiganeko sesibini ukwenzeka kule ndawo oko kwaqala eli phulo. Kunyaka ophelileyo kwagetyengwa oonogada ngobusuku, siganeko eso sathi sabeka lo msebenzi emngciphekweni.
Oyinkokheli kule ngingqi nokwangu mnxulumelanisi nabahlali (community liaison officer) uSiyamboleka James uthe basothukile kwaye banoloyiko lobomi babo. “Singabasebenzi sothukile sesi sehlo kwaye asonwabanga nalapha ngaphakathi emsebenzini. Akhange sicingele ukuba kungenzeka into enje emini lihlabe umhlaba,” uthethe watsho.
Wongeze ngelithi bezinkokheli zokuhlala boyika nokubiza iintlanganiso bathethe nabahlali ngoba abaqinisekanga ukuba kokwenzeka ntoni.
U-James uthe ngokwabantu ababonileyo ngabafanyana ababini abebeme ecaleni kwendlela ngokungathi babukele lomntu usebenzayo abathe benza lo mkhwa. Uthe ingxelo zihambisa zithi uthe xa ejika ugandaganda omnye wabo wasuka waya kumqhubi wanyathela apha evilini yangathi uyakhwela.
“Bame nje imizuzwana embalwa kwabe sekuvakala isithonga bagqiba babaleka,” ucacise watsho uJames.
Usigxeke kabukhali esi siganeko ngelithi sibeka yonke into emngciphekweni njengoko ikokwesibini kusenzeka into kubasebenzi bale nkampani.
“Iyaqala ukwenzeka into enje lihlabe umhlaba. Kunyaka ophelileyo kwafunyanwa oonogada ababini bedunduluzile bedutyulwe basweleka ebusuku. Ngoku kudutyulwa umqhubi kagandaganda ubulawa emini,” utshilo uJames enxunguphele.
U-James usole amapolisa ngokungabonakali ekuhlaleni, wathi oku kunika oonqevu ithuba lokukhwela bazehlele ekuhlaleni.
Umphathi wesiza kwinkampani yakwa Shar Bulelani Beneto uthe umsebenzi usanqunyanyisiwe okwangoku kwaye abakayazi ukuba kuzo buyelwa nini enkomeni. “Sisavalile okwangoku emva kwesisehlo kwaye asikayazi ukuba kuzophinda kuvulwe nini. Nathi sisalinde ilizwi kwabangasentla kunathi basixelele ukuba masithini,” utshilo Beneto.
Othethela isikhululo samapolisa aseNyanga uPatience Sitshitshi uthe ekufikeni kwamapolisa kwindawo yexhwayela abone indoda eneminyaka engama-42 iswelekile. Uthe umfi unabele uqaqaqa ehleli emva kwesiteringa sika gandagada.
Wongeze ngelithi udutyulwe ngemva kwentloko.
“Ugandaganda uye wahamba wayokuxhaswa zizindlu zangasese. Kuvulwe ityala lokubulala. Unobangela ngenxa kunye nomtyholwa ubuqu awaziwa. Kwaye akukabikho umntu ubanjiweyo,” utshilo uSitshitshi.
Ucele nawuphi umhlali onolwazi nobonileyo ngoku bekudutyulwa ukuba aze ngaphambili anxulumane namapolisa aseSamora Machel ku 021 380 3379 okanye ku 086 001 0111.